Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta dhageysanaya Khudbadaha Musharaxiina xilka Madaxweyne iyo ku xigeynkiisa | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta dhageysanaya Khudbadaha Musharaxiina xilka Madaxweyne iyo ku xigeynkiisa
Baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta dhageysanaya Khudbadaha Musharaxiina xilka Madaxweyne iyo ku xigeynkiisa
Maanta oo Talaado ah kuna beegan 10-ka November 2020 waxaa Magaalada Jowhar lagu dhageysanayaa khudbadaha 4-musharax oo isu diiwaangelisay doorashada Madaxweynaha & ku xigeenka DG Hir-Shabeelle.
Xubnaha Guddiga Doorashada ayaa guddonsiiyay shahoodooyinka aqoonsiga si ay u hortagaan Baarlamaanka labaad ee bixinaya codka lagu kala reebayo 4-ta Musharax si berri oo Arbaco ah kuna beegan 11-ka November 2020 uu maamulkaas u yeesho Madaxweyne & ku xigeenkiisa.
Magacyada xubnaha kaararka qaatay ayaa kala ah: Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe & Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan oo ku tartamaya kursiga Madaxweynaha DG Hir-Shabeelle sida ku cad is diiwaangelintooda.
Halka madaxweyne ku-xigeenka ay ku loolamayaan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed & Maxamed Maxamuud Cabdulle [Maxamed Dheere] oo guddiga doorashada Hir-Shabeelle ka qaatay shahaadada aqoonsiga.
Saacadihii lasoo dhaafay Magaalada Jowhar waxaa ka dhacay kulamo siyaasadeedyo ay sameynayeen xubnaha Xildoonka ah, kulamaooda waxa ay intooda badan la qaadanayeen Xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee DG Hir-Shabeelle oo codka bixinaya.
Haddii la doorto Madaxweyne & ku xigeen, waxaa dhameystirmi doona xilalka doorashada ku yimaada, waxaana maamulka uu guda galayaa shaqo howleed adag oo ay ugu weyn tahay la jaanqaadka doorashada 20/21.